Privacy ဖော်ပြချက်: မာတင် Vrijland
ဤ site ကမေလ 25 2018 အပေါ်အင်အားသုံးသို့ကြွလာရသောသစ်ကို AVG ဥပဒေပြဌာန်းအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးရဲ့ privacy ကြေညာချက်တင်သွင်းရန်သင့်အားအတင်းအကျပ် (အီးယူဒေသအားလုံးကိုတူသော) ဖြစ်ပါသည်။
1 ။ မာတင်ဖောင်ဒေးရှင်းကအခမဲ့နိုင်ငံကိုဆက်သွယ်ပါ
အခြေခံအုတ်မြစ်ကဒီ site ပေါ်တွင်အဆက်အသွယ်ပုံစံကနေတဆင့်အဆက်အသွယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
တည်ထောင်: စိန့် Caelciliapad 5, 6815GM, Arnhem
2 ။ သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုအမျိုးမျိုးသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဒီ site ကစုဆောင်းနေသည်:
ဤ website မှာမှတ်ပုံတင်ဖို့
အီးမေးလ်ကနေဒီ site ပေါ်တွင်အသစ်တခုဆောင်းပါး၏စာအုပျ၏တိုက်ရိုက်အကြောင်းကြားစာကိုလက်ခံရရှိမှတက်လက်မှတ်ထိုး
အပတ်စဉ်သတင်းလွှာကိုလက်ခံရရှိမှတက်လက်မှတ်ထိုးခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်စာပေးပို့
အဆိုပါ vrom ၌သင်တို့၏အမြင်စစ်တမ်းတစ်ခု / စစ်တမ်းပေးခြင်း
ဧည့်သည်များနှင့် hits အပေါ်စာရင်းဇယားစောင့်ရှောက်ခြင်း
လွယ်ကူဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုမျှဝေစေကြောင်းဆိုရှယ်မီဒီယာ plug-in နဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်
သင်တစ်ဦး Adblock အသုံးပြုနေသည်ရှိမရှိ detect နိုင်ပါတယ်
3 ။ ပါတီများပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုအပြောင်းအလဲနဲ့ခံယူနိုင်ပါလိမ့်မည်:
သင့်ရဲ့ဒေတာကိုစပိုင်းတွင်ဖောင်ဒေးရှင်းမာတင် Vrijland ၏ပုဂ္ဂလိက server ကိုသိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်သင့်ရဲ့ဒေတာအချက်2အောက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဒေတာကို process မှသင့်ရဲ့ဒေတာကိုသုံးပါတဲ့သူတတိယ plugin ကိုပံ့ပိုးပေးဖို့မှတဆင့်ကူးစက်သော။ ဘယ်အောက်ပါ plugins ကိုဒါသည်ဤ plugins ကိုတညျဆောကျပါပွီသောကုမ္ပဏီများမှပါရှိသည်:
Adblock အားဖြင့် Lite ကိုအသိပေးပါ themeisle.com
အဆင့်မြင့်ကြော်ငြာအားဖြင့် သောမတ်စ် Maier
တို့က Form ကို7ကိုဆက်သွယ်ပါ Takayuki Miyoshi
အားဖြင့်စာရင်းသွင်းသူအီးမေးလ်ပို့ရန်ရေးသားချက်များ Gopi Ramasamy
mailchimp.com အားဖြင့် MailChimp
Automattic, Inc တို့ကစစ်တမ်း Daddy Polls & Ratings အဖွဲ့
Builder ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အားဖြင့် Cozmoslabs
Googel ဖြင့် Google Adsense Adsense
အားဖြင့်အကြောင်းအရာ Pro ကိုကန့်သတ်ရန် အကြောင်းအရာ Pro ကိုရေးအဖွဲ့ကန့်သတ်ရန်
လူမှုစစ်ဆင်ရေး - နေဖြင့် Pro ကို စစ်ဆင်ရေး Plugins တွေကို
YOP စစ်တမ်း Pro ကိုအားဖြင့် yourownprogrammer
4 ။ သင့်ရဲ့ဒေတာသိမ်းဆည်းထားသောအဘို့ကာလ:
သင့်ရဲ့ဒေတာသိမ်းဆည်းထားနှင့် / သို့မဟုတ်သင်ဤ site ကိုတက်သည်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီအချိန်ကာလတစ်ခုအထိအတှကျအသုံးပွုပါလိမ့်မည်။ သငျသညျတက်ကြွစွာဖယ်ထုတ်နှင့်သင့်ဒေတာတွေကိုဖျက်ပစ်ရန်တောင်းဆိုမှုကိုရမည်ဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုသတင်းလွှာဘို့နှင့် / သို့မဟုတ်အသစ်ကဆက်ပြောသည်ပစ္စည်းများအပေါ်တိုက်ရိုက် updates များကိုလက်ခံရရှိလည်းနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်သူတို့ကိုယ်သူတို့မှတ်ပုံတင်ကြပါပြီအဖြစ်ထားရှိမည်နေကြသည်။ အားလုံးကိစ္စများတွင်, သင်သည်ဤ site ပေါ်တွင်အားလုံးန်ဆောင်မှုများအတွက်လူကြီးမင်းကနေ log out ရပါမည်။
5 ။ သင့်ရဲ့ဒေတာနှင့် ပတ်သက်. လူ့အခွင့်အရေး:
သင်ကဒေတာ, access ဖြေရှင်းပေးရန်သို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်ရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သင်တို့သည်လည်းသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏အသုံးပြုမှုကိုကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဤသူသည်သင်တို့ကိုကြိုတင်ပြုရမည်။ သငျသညျနောက်မှဒီအလုပျပါ့စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာဖော်ပြထားအဖြစ်, ထို့နောက်ရေးသားခြင်း, ဖောင်ဒေးရှင်းမာတင် Vrijland ၏စာတိုက်လိပ်စာနှင့် ပတ်သက်. မှတ်ပုံတင်မေးလ်ကနေတဆင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ကတရားဝင်ရည်ရွယ်ချက်ဒေတာစုဆောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှိကွောငျးပုံပေါ်လျှင်, ဖောင်ဒေးရှင်းမှဒေတာအသုံးပြုမှုအတွက်ဆက်လက်တည်ရှိထိန်းသိမ်းနည်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ တိုင်းအရာဝတ္ထုချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူး။
6 ။ ပစ္စည်းများပေါ်တွင် comments:
အားလုံးသင့်ရဲ့မှတ်ချက်များကိုသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကောင့်မှာသငျသညျဖွငျ့ဖွစျသညျတင်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ရေးဖို့အဘယ်အရာကိုကိုယ်အဘို့အားလုံးကိစ္စများတွင်တာဝန်ရှိပါတယ်ဖြစ်၏ ဤအမှတ်ချက်များဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အောက်မှာနေရာချထားများအတွက် site ၏စီမံခန့်ခွဲသူများကဖြည့်ညှင်းကအတည်ပြုခြင်းကိုခံရလျှင်ပင်။
7 ။ သင့်ရဲ့ဒေတာကိုလွှဲပြောင်းရန်ညာဘက်:
အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းကမာတင် Vrijland ဤ site ပေါ်တွင်ကမ်းလှမ်းန်ဆောင်မှုများနှင့်အညီပါလျှင်အချက်အလက်များ၏အသုံးပြုမှုအတွက်တတိယပါတီများမှမှသင့်ရဲ့ဒေတာလွှဲပြောင်းရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဤသည်စာရင်းဇယားအပေါ်အချို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတတ်ပေမယ့်လည်းအသစ် posted ဆောင်းပါးများအကြောင်းမေးလ်များသို့မဟုတ်မွမ်းမံအဖြစ်မေးလ်ဝန်ဆောင်မှုန်ဆောင်မှုကိုပြောင်းလဲလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်တဲ့ software ကို plugin ကို၏အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤသည်ကိုလည်းဆာဗာသို့မဟုတ် hosting အတွက်ပံ့ပိုးပေးဖို့ရွေ့လျားဥပမာ, လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
8 ။ သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဆုတ်ခွာဖို့ညာဘက်:
ဝက်ဘ်ဆိုက် martinvrijland.nl 1 သင်သင့်ရဲ့ဒေတာကိုမဆိုကြာကြာအသုံးပြုချင်ကြောင်းသတ်မှတ်ခွင့်ပြုမရရှိနိုင် option ကိုအတည်ပြုခွင့်ပြုပါတယ်။ ဤသည်ဆုတ်ခွာဖို့ညာဘက်အောက်မှာကျရောက်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးခိုင်လုံသော ID ကိုကဒ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်သင့် IP address ကိုတစ်စခရင်ပုံ၏တစ်ဦးမိတ္တူဖြည့်စွက်အားဖြင့်သင်တို့ကိုကလက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုစာတင်သွင်းမှတ်ပုံတင် mail ဖြင့်ရေးသားရုပ်သိမ်းသင့်ရဲ့ညာဘက်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါဟာသင်ဖြစ်ကြသည်ဟုပြောလူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာဖော်ပြထားသကဲ့သို့, ဖောင်ဒေးရှင်းမှမာတင် Vrijland ၏စာတိုက်လိပ်စာနှင့် ပတ်သက်. ဖြစ်နိုင်သည်။ ကတရားဝင်ရည်ရွယ်ချက်ဒေတာစုဆောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှိကွောငျးပုံပေါ်လျှင်, ဖောင်ဒေးရှင်းမှဒေတာအသုံးပြုမှုအတွက်ဆက်လက်တည်ရှိထိန်းသိမ်းနည်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ တိုင်းအရာဝတ္ထုချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့တင်သွင်းစာရွက်စာတမ်းများစစ်ဆေးခြင်းပြီးနောက်ဖကျြဆီးခံရပါလိမ့်မယ်။
9 ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအခွင့်အာဏာ:
သင်ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးအခွင့်အာဏာအတွက်သင့်ရဲ့ဒေတာများအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. တိုင်ကြားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဒါကဥပဒေရေးရာမှန်သည်။ သငျသညျထို site သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုကိုင်တွယ်ဘယ်လိုမဆိုတိုင်ကြားချက်ရှိပါကဒီတော့သင်ကဥပဒေဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအခွင့်အာဏာမှအစီရင်ခံရန်ကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်။
10 ။ ဒေတာပြန်ရုတ်သိမ်း:
သင်သည်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးရန်ဆန္ဒရှိကြဘူးသို့မဟုတ်သင်ရုပ်သိမ်းလိုလျှင်, သင်သည်ဤ site ပေါ်တွင်ကမ်းလှမ်းန်ဆောင်မှုကိုအသုံးမပြုနိုင်လျှင်။ စီမံခန့်ခွဲသူဖြစ်လျှင်ဤ site ကိုသွားရောက်လည်ပတ်ဘို့သင့် IP address ကိုပိတ်ဆို့ရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
11 ။ ကန့်သတ်လက်လှမ်း:
သငျသညျတစ်လလျှင်သတ်မှတ်ထားတဲ့လှူဒါန်းခြင်း၏ပုံစံအတွက်ရိုက်ထည့်ပါကြောင်း paid အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အတူ, ဒါမှမဟုတ်ထပ်တလဲလဲဘဏ်ငွေလွှဲမှတဆင့်, သင်ကန့်သတ်လက်လှမ်းဖြင့်ဖုံးလွှမ်းအချို့သောထုတ်ကုန်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်ဆိုပါကဆုံးဖြတ်ရန်သင့်အချက်အလက်များကိုအသုံးပြု PayPal ကသို့မဟုတ်ထပ်တလဲလဲအကြွေးလွှဲပြောင်း reperterende ။ ကန့်သတ်အကြောင်းအရာ Pro ကိုအတူအမှတ်3အောက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုတစ်ခု automated plugin ကိုမှတဆင့်ထိန်းချုပ်ထားသည်။ သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုအရှင်သာအဖွဲ့ဝင်များကဖတ်လို့လွယ်သောဆောင်းပါးများမှရယူဖြစ်စေမဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုသည်။
12 ။ အဓိပ္ပာယ်အဖွဲ့ဝင်:
အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏အဓိပ္ပါယ်ဘဏ္ဍာရေးမီဒီယာသမျှအရာကျော်တစ်ဦးအဓိပ္ပါယ်သို့မဟုတ်အစဉျအမွဲကာလအတွက်ဖောင်ဒေးရှင်းမာတင် Vrijland တစ်ဦးလှူဒါန်းမှု၏ပုံစံအတွက်တစ်ထပ်ပေးချေမှုထဲသို့ဝင်ရသောသူအဆိုလူတစ်ဦးသည်နှင့်ကြောင့် ဒီ link ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ သငျသညျအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းလျှင်, သင်သည်သင်၏ data တွေကိုအောက်မှာတွေ့နိုင်ပါသည်ရှိသင့် ဒီ link ကို။ ထိုပြည်၌သင်တို့သည်ဖြစ်နိုင်သည်သင့်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ပေါ်တွင်သင်၏ setting များကိုပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။ သင့်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖောင်ဒေးရှင်းမာတင် Vrijland တစ်ဦးလှူဒါန်းမှုအဖြစ်အားလုံးကိစ္စများတွင်မြင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
မားကို့စ op Coronavirus: ဗိုင်းရပ်စ်တွေကဘယ်ကနေလာတာလဲ၊ သူတို့ဘယ်လိုများများပြားလာပြီးပြောင်းရွှေ့ကြတာလဲ။